Samsung Galaxy S8 dia haseho amin'ny 29 martsa | Vaovao momba ny gadget
Ny Samsung Galaxy S8 dia haseho amin'ny 29 martsa ary atomboka amin'ny volana aprily.
Amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny herinandro vitsivitsy isika izay ahitàna vaovao marobe mifandraika amin'ny iray amin'ireo terminal lehibe indrindra amin'ny taona, ny Samsung Galaxy S8. Anisan'ireo vaovao izay mipoitra, vitsivitsy no miseho izay tokony hitandremanao tsara, satria afaka mandalo ho sandoka fotsiny izy ireo izay manandrana manintona ny saina amin'ireo toerana nanombohany.
Manana iray amin'ireo izahay izay loharano iray fantatra amin'ny anarana hoe @ Ricciolo1, izay efa manana traikefa amin'ny fanivanana vaovao taloha, dia manamafy fa ny Samsung Galaxy S8 dia hita ao amin'ny MWC any Barcelona. Na izany na tsy izany, vitsivitsy ihany no afaka nahita ny terminal tamin'ny volana lasa. Midika izany fa tsy haseho amin'ny besinimaro ao amin'ny MWC. Zavatra mitovy amin'ny zava-nitranga tao amin'ny CES tamin'ny BlackBerry "Mercury."
Fa io ihany io @ Ricciolo1, izay milaza fa haseho ny Galaxy S8 farany tamin'ny 29 martsa. Ny telefaona dia havoaka mandritra ny herinandro fahafito ambin'ny folo amin'ity taona ity, izay eo anelanelan'ny 24 sy 30 aprily. Manakaiky ny iray amin'ireo tsaho farany milaza fa amin'ny 17 aprily izao ny fanombohana ny terminal
Izy io aza dia afaka manome ny vidin'ny Galaxy S8 rehefa nahatratra $ 849. Fantsona iray fantatsika fa ho avy amin'ny Gorilla Glass 5, efijery Super AMOLED mirefy 5,7 santimetatra miaraka amina vahaolana 1440 x 2560, puce Snapdragon 835 miaraka amina CPU octa-core sy ny Adreno 540 GPU. Andrasana fakan-tsary 12MP ao aoriana ianao ary ny eo alohan'ny 8MP.
Ity no kinova mahazatra izay heverina fa ny sisiny, satria ny Galaxy S8 Plus dia kasaina hatomboka miaraka a efijery lehibe kokoa noho ny 6,2 santimetatra ary hampiditra karazana hatsaram-panahy hafa toa an'io toetra "tsy misy kibay" io.
Voalaza koa fa tsy hampiditra bokotra an-trano ary hanana ny sary famantarana Samsung eo ambany izy io. Hoy aho tamin'ny voalohany, mba haka an'ity karazan-baovao ity amin'ny tweezers.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Ny Samsung Galaxy S8 dia haseho amin'ny 29 martsa ary atomboka amin'ny volana aprily.
Nintendo dia manazava ny antony tsy ahafahantsika mividy NES Classic Mini
Ahoana ny fomba hamerenana amin'ny laoniny ny sary voafafa, horonan-tsary ary mozika voafafa